n'elu 25 Spotify égwu aka gị Music Ahụmahụ
Spotify N'ezie ghọọ otu n'ime ndị premiere music gụgharia ọrụ nke iri gara aga. Ọ na e dere fọrọ nke nta 20 nde songs na ya nnukwu okwu. Mgbe afọ ise nke ya igba egbe, na mmalite-enye mma ka ịchọgharị ma kpọọ plethora nke-awụ ọsọ n'ugwu. Spotify nwekwara obụrede mbụre banyere Baịbụl dum nhọrọ nke HTML5, Java, na CSS ngwa ọdịnala n'ihi ịgagharị niile music na n'elu ikpo okwu nwere na-enye.
Iji mee ihe nke ọma na Spotify n'elu ikpo okwu, i kwesịrị eji ọrụ nke ụfọdụ ngwa. Na-esonụ bụ ụfọdụ ndị kasị mma Spotify ngwa ga-eme ka gị na ahụmahụ na Spotify n'ezie uru na-echeta.
The Danish-deere Moodagent arụ music dị ka gị ọnọdụ. The ngwa emepụta ndepụta ọkpụkpọ na anọ mejupụtara: nro, sensuality, iwe, na obi ụtọ. Ọ na-ekwe ndị ọrụ ịtọ mmetụta uche akụkụ na nwere ike gbanwee ofụri oge nke playlist. Ị nwere ike mikpuo n'ime dị iche iche ọnọdụ uche ọzọ karịa mbụ onye na-ahụ na mbụ setịpụrụ maka playlist.
# 2. Fọk
Nke a bụ Chicago dabeere dabeere na Tony Montana egbugbu na nkiri Scarface. Fọk na-conveniently agbajikwa ala atọ browsable taabụ: Best New Albums, All Nyocha, na listi ọkpụkpọ. Onye ọ bụla atụmatụ album-eburu mba si onye iri.
Na enyemaka nke a ngwa, ndị ọrụ nwere ike soro ndị lyrics nke song ha na-ege ntị. The ngwa ga-akpaghị aka pịgharịa gaa na ala obi ike na nke ugbu a akara dị ka track a na-egwuri. Ị pụrụ ime ka visual mgbanwe maka font size na ndabere agba kwa.
A na ngwa na-agwa ndị ọrụ na-ege ntị songs si na genre dabeere listi ọkpụkpọ. The ngwa dere nnukwu ndepụta nke genre na isiokwu ụlọ, ndị ọrụ na-ume na-eme ka ha onwe ha ụlọ nke genre.
# 5. The mama Machine
A na ngwa akwusila na nso nso gwa songs nakwa dị ka listi ọkpụkpọ site na karịa 800 ewu ewu na anya-kwaa music blọọgụ. Ọ nwere taabụ atọ: Featured Blogs, blọọgụ site Name, na blọọgụ site Genre.
A na ngwa scrapes Twitter maka #nowplaying hashtag. Ọ bụrụ na ị ka iso ndị na-ìgwè mmadụ dị mkpa ka ị mgbe ahụ TweetVine ga-ezigbo maka gị.
# 7. ịgwakọta
Ọ na-atụ aro na soundtracks mgbe egwú ka ozi ọma. Ọ na-agwakọta ọhụrụ music ozi ọma na ịmata kere listi ọkpụkpọ maka gị.
# 8. Ugbu a Nke ahụ bụ ihe m na-akpọ Music
A na ngwa na-enyere gị iji strimụ UK si n'elu 20 online. O nwere ihe ndị ọzọ na atụmatụ nwekwara dị ka playlist e kere eke nakwa dị ka ọgbọ ngwaọrụ.
# 9. Anyị na-achụgharị
A na ngwa bụ n'ihi na ọtụtụ adventurous music ndị hụrụ. The abụrụ chaatị ndepụta bụ nnukwu ihe mere iji wụnye ọrụ a. The ngwa na-atụ aro listi ọkpụkpọ dabeere na ihe ndị ọzọ ọrụ nke ngwa na-ege ntị.
# 10. Naj
The British Indie kpọọ nye elu ihe kasị mma si Blightly na karịrị nke ahụ. Ị nwere ike mfe ịlele azụ-katalọgụ na ọtụtụ ụzọ.
# 11. Were
Ọ bụ ihe jupụtara kpochapụwo music. Ọ bụ ezigbo oke maka ndị zuru beginners. Ọ nwere nke ukwuu nke na ọ bụ ike mara ebe na-amalite.
# 12. The Hapụrụ
Ọ bụ mara mma nke ukwuu dị ka were ngwa n'ihi na-achọta ochie music na i Agbaghara. Nke a na oge gburugburu, ọ bụ kpochapụwo oké nkume na Pop. Na-akwanyere ùgwù artists ọnụọgụgụ songs na listi ọkpụkpọ.
# 13. Rolling Nkume
A na ngwa na-anakọta ihe curated listi ọkpụkpọ, albums enyocha na magazin nke "Rolling Nkume" na ohuru-awụ ọsọ n'ugwu n'ime a ewere interface. Ị n'ụzọ nkịtị ịnweta ekpomeekpo nke dum magazine.
# 14. Hot ma ọ bụ bụghị
A na ngwa atụmatụ ụdị egwuregwu na-enye gị ohere ikpebi ma random-awụ ọsọ n'ugwu ise n'elu gị ụgbọ mmiri ma ọ bụ sinks ya. Ozugbo i mere mkpebi gị, ngwa ga-agwa gị uto n'etiti atọ ige: ọzọ, nkume, na obodo mepere emepe.
A na ngwa na-mepụtara Universal Music, na ya mere a na-emesi ya artists. O nwere ihe katalọgụ nke listi ọkpụkpọ kere maka n'oge ndị pụrụ iche.
Aha a genre, ika, ma ọ bụ isiokwu, na-eche nke a top 10. N'ihi ya, ị na-enwe ike ike ndepụta ọkpụkpọ gị, na-agagharị na listi ọkpụkpọ nke ndị ọzọ, ma na-akpọ ha. The ngwa site n'elu 10 n'etiti ndị niile top 10s kere ke ngwa dabeere na-ewu ewu.
Na ọ dị adị ọbụna tupu Spotify dị ka a ọrụ maka nkwanye songs na-achịkọta ndị listi ọkpụkpọ. Ugbu a, ọ bụ a na-elekọta mmadụ na netwọk nke music. Ikwunye na ngwa nke Last.fm n'ime Spotify, na ị ga-ahụ flavor nke ma ndị Refeyim na music.
# 18. Iyo
Ọ na-akpaghị aka site na listi ọkpụkpọ dabeere na gị ọsọ ọsọ nka, n'ọdịdị gị ụkpụrụ na Spotify, ma ọ bụ ọbụna na oke nke ndị enyi gị. Ọ pụrụ ọbụna imepụta playlist dabeere na ndepụta nke ndị e debara aha maka ihe omume.
A na ngwa ghotara ọkacha mmasị gị na ìgwè ndị agha gị nso, ikwe gị ntị ha ndụ. Ọ na-enyocha gị playlist na-echiche banyere gị ọkacha mmasị na-ahapụ gị mara na ọ bụrụ ọkacha mmasị gị artists bụ gị nso.
O nwere ihe ngwaọrụ nke eke ọhụrụ playlist, ịtụ vootu na playlist nke enyi, na-agagharị na-awụ ọsọ n'ugwu na-enye. Ọ na-eburu nke ukwu nchekwa data nke music.
Ọ na-enye gị zuru ezu ederede nke reviews nke music na ị na-anụ. Ọ na-enye gị ohere Ndenye ohere ka album si listi ọkpụkpọ. Ị nwere nhọrọ ịkọrọ tracks ma ọ bụ na-agbakwunye ha gị sidebar.
# 22. Blue Cheta
Ọ bụ ihe magburu ngwa n'ihi na Jazz enthusiasts, na e dere na music data site n'oge gara aga afọ 70.
# 23. Iputa
Ọ tracks data anya ịchọta ọhụrụ artists na-amasị gị. Ọ na-enyocha gị ụkpụrụ nke music n'elu a ogologo oge nke oge iji chọta ọkacha mmasị gị artists.
Chọta mkpụrụ obi gị ma ọ bụ nwunye dabeere na gị music uto. Ị pụrụ ọbụna nyo nsonaazụ site nká, na ọnọdụ.
Ọ na-enye ọrụ ahụ ohere ọhụrụ releases, tour ụbọchị, na tour ụbọchị maka nka nke Matador. O nwere ihe kenkwukorita akụkọ ihe mere eme nke labeelu aga azụ ya ntọhapụ data ke 1992.
> Resource> égwu> Top 25 Spotify ngwa Download ugbu a